Sanatar sheegay iney Xukumadda la wadaagayaan joojinta ka bixista AMISOM ee Hirshabeelle – Kalfadhi
Sanatar Cusman Axmed Macow ayaa maanta Muqdisho ugu sheegay suxufiyiinta in ay Hirshabeelle soo gaarsiisay Golaha Aqalka Sare cabasho ah in ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) kala wareegeyso AMISOM amaanka iyo sugidda nabadgelyada Hirshabeelle, iyada oo uu maamulka gobolkaas qabo in aysan Ciidanka Dowladda ku filneen xaqiijinta amaanka deegaankaas.
Wasiirka Amniga Hirshabeelle, Cabdulqaadir Aadan Jeelle, ayaa cabashadaas Sanataro uu ka mid yahay Xildhibaan Macaw kusoo simay, waxaana sida uu Macaw sheegayo ay iyaguna aqbaleen cabashadaas, ayna la wadaagi doonaan Xukumadda. “Wali lama gaarin diyaargarowgii Ciidanka Xooga Dalka ay kula wareegi lahaayeen (amaanka)” ayuu yiri Sanatar Macaw. “Hirshabeelle waa halbowlaha Soomaaliya, oo Koofur iyo Waqooyi isku xiraayey” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Isaga oo taas cuskanaya ayuu Sanatarku sheegay in aysan sax ahayn in lagu degdego in halkaas ay ka baxaan Ciidanka AMISOM. “Laakiin waan ka wada hadli doonnaa” ayuu yiri Sanatar Macaw. “Aqalka Sare go’aan buu ka qaadan doonaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa uu intaa ku daray in ay joojinta ka bixista AMISOM ee Hirshabeelle hor geyn doonaan cid kasta oo ay quseyso.
Ilaa 1000 askari, oo ka tirsan Ciidanka Burundi ee qeybta ka ah Hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, ayaa dhamaadkii bishii hore la shaaciyey in ay ka bixi doonaan Soomaaliya, gaar ahaan Hirshabeelle, sababo la xiriira inaan loo hayn dhaqaalo. Hase ahaatee, Madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, waxa uu horay u sheegay in aysan Ciidanka Soomaaliya wali awood u lahayn kala wareegidda hawlgalka AMISOM ee Hirshabeelle.
Golaha wasiirada cusub ee Puntland oo lagu dhawaaqay